Howlgallo ay ciidamada booliska ka sameeyeen xaafadda Eastleigh ayay kusoo qabteen lix suun oo nooca isqarxinta ah, 12 Bambaano, afar qori nooca AK47-ka iyo rasaas, waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen laba qof oo looga shakisanyahay in ay katirsanyihiin Al-shabaab.
Taliye ku xigeenka booliska Kenya Moses Ombati oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalladani laga soo qabtay hubka ay iska kaashadeen sirdoonkooda iyo dadka rayidka ah.
“Waxay qorsheynayeen weerar weyn iyo burburin, waxaan gacanta ku dhignay lix suun oo nooca isqarxinta ah, rasaas badan, bambaanooyinka gacanta iyo laba nin oo laga shakisanyahay kuwaasoo maxkamad lasoo taagi doono,” ayuu yiri Taliye kuxigeenka oo warbaahinta la hadlay.
Booliska ayaa sheegay in ay baadigoob ugu jiraan sideed nin oo la sheegay in ay katirsanaayeen kooxaha hubka lagu soo qabtay, kuwaasoo ay sheegeen in ay goobta ka baxsadeen kadib markii ay ka warheleen howlgallada ciidamada.
Qalabka isqarxinta loo isticmaalo ee ay boolisku heleen ayaa la sheegay in ay ku xirnaayeen mobile-lo, waxayna saraakiisha boolisku sheegeen in hadii qaraxyadan la isticmaali lahaa ay geysan lahaayeen khasaarooyin baaxad leh.
Taliye ku xigeenka Booliska Mr. Omati ayaa sheegay in hubka la qabtay ay leeyihiin Al-shabaab, wuxuuna sheegay in Al-shabaab ay ku mashquulsanyihiin sidii ay qaraxyo uga geysan lahaayeen Kenya, isagoona xusay in loo baahanyahay foojignaan dheeri ah.
Arintan ayaa kusoo beegmeysa xilli dhawaan Booliska ay gacanta ku dhigeen ku dhowaad ilaa 157 Bambaano kuwaasoo laga helay guri ku yaal xaafadda Nairobi, waxaana ay arintani muujineysaa qatarta ay dowladda Kenya ugu jirto in qaraxyo laga fuliya dalkeeda.